ဗုသ –ူပည်သူလူထုဟာသင်္စာမဖောက်ဘူး | MOEMAKA (stop) PRESS !!!
← မောင်စမြ်းရည် – သင်ရိုးတြဲဖက် လက်တြေႛပညာ	ိုံင်ငံရေးအကဵဉ်းသားဟောင်း ၈၈ ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင် လေးလငြ် (ခ) ကိုလေိးံငြ့် စကားလက်ဆုံ – ၂ →	ဗုသ –ူပည်သူလူထုဟာသင်္စာမဖောက်ဘူး	26
ူပည်သူလူထုဟာသင်္စာမဖောက်ဘူးဗုသုသဂုတ် ၂၅၊ ၂၀၀၇
ညောင်ိံစ်ြပင်ညီလာခံကနေူမန်မာူပည်ိုံင်ငံရေးကို သေဒဏ်ပေးဖိုႛ နောက်ဆုံးစီရင်ခဵက်ခဵဖိုႛ စည်းဝေးနေခဵိန်မြာပဲ လမ်းမတေပြေၞမြာူပည်သူလူထုဟာ အဲဒီညောင်ိံစ်ြပင်ညီလာခံအပၝ နအဖစစ်အုပ်စုကိုပၝ သေဒဏ်ပေးဖိုႛ ဆိံ္ဋူပနေုကတယ်။
နအဖအဖိုႛ အလစ်ခံလိုက်ရတာလိုႛ မေူပိာိုံင်ဘူး။ သူတိုႛူပင်ဆင်ထားတာတြေ အမဵားဋ္ဌကီးပဲ။ ဒၝပေမယ့် သူတိုႛတက်ြထားတာထက်္ဘဖိခြဲရခက်နေတာတော့ အမန်ြပဲ။ ဆိံ္ဋူပပြဲတစ်ခုက္ဘိုဖိခြဲရတာ မခက်ဘူး။ ဒၝပေမယ့် ဆိံ္ဋူပပြဲမန်ြသမ္တွ ပေဵာက်သြားအောင်လုပ်ဖိုႛကဵတော့ သူတိုႛထင်သလိုမလယ်ြတာ တြေႛနေရတယ်။ နောက်္ဘပီး ဒၝတေဟြာ အခုမြ အစပဲရြိသေးတယ်ဆိုတာကိုမန်မာူပည်ရဲႛိုံင်ငံရေးအေုကာင်း နားလည်သူတိုင်း သဘောပေၝက်ုကတယ်။ နအဖလည်း ကောင်းကောင်းနားလည်တယ်။ သူခိုးနဲႛ အိမ်ရင်ြသာသိတယ် ဆိုတာမဵြိး။ အခုကိင်္စဟာ လောင်စာဆီူင်္ပံနာသက်သက် မဟုတ်ဘူးဆိုတာလည်း ရငြ်းနေတယ်။ အမန်ြပဲ၊ အစဆိုတော့ ပၝ၀င်တဲ့ဦးရေ နည်းနေသေးတယ်။ တခဵြိႛကူပည်သူလူထုဋ္ဌကီး ပၝမလာရကောင်းလားလိုႛ စိတ်တို၊ စိတ်ပဵက်တာတြေုကားနေ၊ တြေႛနေရတယ်။ တခဵြိႛကဆိုရင်ူပည်သူလူထုဟာေုကာက်တယ်လိုႛတောင် နိဂုံးခဵပြ်ုကတယ်။ လောကမြာ ကိုယ်လုပ်တဲ့ အလုပ်တိုင်း သူမဵားလိုက်မလုပ်တာကို သတ္ဇိနည်းတယ်လိုႛ လက်ညြိးထိုးလိုႛ မူဖစ်ပၝဘူး။ ဘာေုကာင့် အဲဒီလို ကြာဟနေတယ်ဆိုတာကို သေသေခဵာခဵာ လေ့လာပိုင်ူးခား နည်းနာရြာဖိုႛပဲူဖစ်တယ်။
လမ်းပေၞမြာ ဆိံ္ဋူပနေုကသူတေကြ ပတ်ဝန်းကဵင်ကလူတေကြို “မေုကာက်ုကပၝနဲႛ၊ ထက်ြခဲု့ကပၝ၊ ပူးပေၝင်းလညြ့်ပၝ“လိုႛ လမြ်း္ဘပီးခေၞတာ မဆန်းဘူး။ ဒၝပေမယ့် ဆိံ္ဋူပပြဲအောင်ူမင်မမြရတာ လူထုဋ္ဌကီးေုကာက်နေလိုႛဆ္ဘိုပီး နိဂုံးခဵပ်ြလိုႛကတော့ အမြားဋ္ဌကီးမြာုးကလိမ့်မယ်။ူမန်မာူပည်သမိုင်းမြာ နာမည်ဋ္ဌကီးလတြဲ့ လူထုအပေၞအူမင်မြားမြ၊ူပစ်မြားမဋ္ဌြကီးတစ်ခုကိုကားဖူုးကမယ်ထင်တယ်။ အလံနီသခင်စိုး ကိင်္စပဲ။ ဗကပထဲက ခြဲထက်္ဘြပီးစမြာ တူခားသူအားလုံးကို အခေဵာင်သမားလိုႛ အူပစ်တင်္ဘပီး လက်မတြဲိုံင်ဘူးလိုႛေုကညာထားတဲ့ သခင်စိုးဟာ ရန်ကုန်မြာ လူထုဆိံ္ဋူပပြဲဋ္ဌကီးတစ်ခုကို သူတိုႛခဵည်းဖော်ထုတ်ဖိုႛ စည်းရုံးတရားဟောတော့ လူထုက ထက်ြမလာဘူး။ သူတိုႛအလံနီလေး လက်တဆုပ်စာလောက်ဆိုတော့ အစိုးရက ရေပိုက်တေနြဲႛ အလယ်ြတက္ဘူဖိခြဲပစ်လိုက်တယ်။ အဲဒီအခၝမြာ အတော်ရက်ြသြားတဲ့သခင်စိုးက “ရန်ကုန်္ဘမြိႛက လူထုဟာ လူထုမဟုတ်ဘူး၊ လဒူပဲ“လိုႛေူပာခဲ့တယ်။ အဲဒီစကားဟာ ရာဇ၀င်ကိုတင်ြရော ဆိုတာမဵြိူးဖစ်ခဲ့တယ်။ ဆိုလိုတာ လူထုကိုသေသေခဵာခဵာ အကဲူဖတ်တာ၊ ပၝလာအောင်လုပ်တာတိုႛဟာ အရည်အခဵင်းတစ်ခုဖစ်တယ်။ လူထုဟာ သမိုင်းဖန်တီးသူဖစ်တယ်ဆိုတာ တရားသဘော၊ သမိုင်းခေတ်နဲႛခဵ္ဘီပီးေူပာတာူဖစ်တယ်။ လပ်ြရြားမတြစ်ခု၊ တိုက်ပြဲတစ်ခုစီအတကြ် သီူးခားစီ ခြဲူခမ်းစိတ်ူဖာ သုံးသပ်္ဘပီး လုပ်ငန်းစဉ်တြေ၊ နည်းပရိယာယ်တြေ ခဵမတ်ြရတယ်။ လူထုနဲႛပတ်သက်လာရင် ကိုယ်က သူႛဆီကိုသြားရတာဟာ အေူခခံတရာူးဖစ်တယ်ဆိုတာ မမေ့သင့်ဘူး။ ကိုယ်က သူႛဆီကို ထဲထဲဝင်ဝင် သြာိးိုံင်မြ သူက ကိုယ့်ဆီကို လာမြာ။ ကိုယ်ကအမိန်ႛပေးသလို ငၝ့နောက် လိုက်ခဲု့ကလိုႛ ခေၞနေလိုႛမူဖစ်ဘူး။ လူထုမပၝဘဲ ကိုယ်က ဘာမလြုပ်လိုႛမရဘူး၊ လူထုဘက်ကတော့ ဒီခေၝင်းဆောင်ကို မဋ္ဌကိက်ြရင် နောက်ခေၝင်းဆောင်ကို ရြေးခဵယ်လိုႛရတယ်။ ဒီိုံင်ငံမြာ ဒီလူထုပဲရြိတယ်။ ကိုယ့်မြာ ရြေးစရာမရြိဘူး။ ဒီလူထု လက်ခံသဘောပေၝက်အောင် ဘယ်လိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာပဲ စဉ်းစားသင့်တယ်။ တစ်ပြဲတည်း၊ တစ်ခဵီတည်းနဲႛ လူထုတရပ်လုံး လမ်းပေၞတက်လာတယ်ဆိုတာ ဘယ်သမိုင်းမြာမမြရြိဘူး။ရစ်ြလေးလုံးအရေးတော်ပုံဋ္ဌကီး ရြေႛမြာ ဇာတ်တိုက်တာတြေ ဘယ်ိံစ်ြဋ္ဌကိမ်ဘယ်ိံစ်ြလီ လုပ်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာူပန်စဉ်းစာုးကည့်ပၝ။ ကိုယ့်ဘက်က ဘယ်လောက်ူပင်ဆင်မတြေ လုပ်ထားတယ်ဆိုတာလည်း အရေးဋ္ဌကီးတယ်။ အမာခံ အတငြ်းစည်း တည်ဆောက်တာဟာ အရည်အတက်ြအာူးဖင့် ဘယ်လောက်မဵားလိုႛ ဘယ်လောက်ကဵယ်ူပန်ႛသလဲ။ နောက်္ဘပီး လူထုထဲကို ဘယ့်ကလောက် စိမ့်ဝင်ထာိးိုံင်သလဲဆိုတာလည်ူးပန်ဆန်းစစ်ရမယ်။ အရင်တုန်းက တနေရာရာက ဖောက်ခြဲလိုက်ရင် အုံရကလြိုက်လာုကတယ်ဆိုတာဟာ သူႛရြေႛက၊ သိပ်မုကာလသြေးတဲ့ ကာလအတငြ်းမြာူဖစ်ပေၞခဲ့တဲ့ အရေးအခင်းတြေ ရြိနေလိုႛဆိုတာဟာ တစ်ေုကာင်ူးဖစ်တယ်။ အခုဟာက အဲဒီလိုရြေႛေူပးတြေ စ္ဘပီးဖော်ထုတ်နေတဲ့ အဆင့်မဵြိးပဲရြိသေးတယ်။ နောက်္ဘပီး အရင်ကလည်း အဲဒီလိုဖောက်ခြဲတုန်းမြာပဲ အဖမ်းခံသြားရတယ်ဆိုတဲ့ အူဖစ်အပဵက်မဵြိးတေလြည်း မနည်းဘူးဆိုတာ မမေ့သင့်ဘူး။ ဒၝပေမယ့်ူပည်သူလူထုဟာ ဒီနေႛူဖစ်နေတာတေကြို မဵက်စိမြိတ်၊ နားပိတ်ထာုးကတာမဟုတ်ဘူး။ သူတိုႛမဵက်စိဖငြ့်၊ နားစငြ့်္ဘပီး စောင့်ုကည့်နေုကတာသာူဖစ်တယ်။ ဘယ်သူတေပြၝသလဲ၊ ဘယ်သူတေမြပၝဘူးလဲ၊ သူတိုႛခေၝင်းထဲမြာ စဉ်းစားနေတာပဲ။ သူတိုႛ လေးစားယုံကည်တဲ့ ဘယ်သူဘယ်ဝၝတေကြ ဘယ်လိုတုံႛူပန်သလဲ။ ဘယ်လို သဘောထားဖော်ူပသလဲ။ သူတိုႛ မဲဆိံ္ဋပေးခဲ့တဲ့ လူတြေ ဘယ်လိုအခန်းက ပၝ၀င်သလဲ။ ဒၝတေအြားလုံးကို ထည့်တကြ်ုကတာ ဓမ္ထတာူဖစ်တယ်။ ကိုယ့်အိမ်နီးနားခဵင်းထဲက ဘယ်သူတေပြၝသလဲ၊ ကိုယ်သိတဲ့လူပၝသလား၊ ဒၝ့အူပင် ဘယ်သူတြေ-ဘယ်သူတြေ မပၝသေးသရြေႛတော့ မပၝသေးဘူးဆိုတဲ့ စဉ်းစား နည်းမဵြိးလူထုမြာ ရြိတတ်ုကတာပဲ။ ဒၝမဆန်းဘူး။ လူထုကိုိုံင်ငံရေးသမားလို တက်ြတာ၊ စဉ်းစားတာ၊ တောင်းဆိုတာဟာ ကိုယ် သူငယ်မစင်သေးတာကိုပတာသာူဖစ်တယ်။ူမန်မာူပည်မြာ လူထုအုံရကမြတြေ မပေၞစေခဵင်တဲ့၊ူမန်မာူပည်ူင်္ပံနာကို စစ်အစိုးရအလိုကဵ လိုက်လေဵာေူဖရငြ်းစေခဵင်ုကတဲူ့မန်မာူပည်သားတခဵြိႛနဲႛိုံင်ငူံခားသားတခဵြိႛတေဟြာ လူထုမပၝတာကိုထောက်ူပ္ဘပီး ညောင်ိံစ်ြပင်ကို လက်ခံခိုင်းနေုကတယ်။ စစ်ကားဋ္ဌကီးတစ်စင်း ဒုန်းစိုင်းမောင်းဝင်လာတာကို ရြေႛကနေ ၀င်မတားနဲႛ၊ စပယ်ယာလုပ်္ဘပီး စစ်ဗိုလ်ကို ယပ်ခတ်ပေးဖိုႛ တိုက်တနြ်းနေတဲ့ ပုဂ္ဂိလ်ြတေဟြာလည်း သူတိုႛေူပာသာမယ့် အကက်ြကိုစောင့်နေုကတယ်။ အခုအထိတော့ သူတိုႛဘာမမြေူပိာိုံင်ုကဘူး။ ခေဵာင်မြာ ကုပ်နေုကတယ်။ ဒီနေႛတိုက်ပြဲဟာ ကဵားနဲႛဆင် လယ်ူပင်တြေႛနေတဲ့ အနေအထာူးဖစ်တယ်။ နအဖဟာ ဘယ်လိုကားဝင်မကြိုမြ လက်မခံဘူး၊ သေတဲ့အထိ မိုက်ဖိုႛ ဆုံူးဖတ်ထားတယ်ဆိုတာ ရငြ်းနေတယ်။ သူတိုႛဟာ သူတိုႛရဲႛဖြဲႛစည်းအုပ်ခဵပ်ြပုံ အတည်ူဖစ်ဖိုႛအတကြ် ဘာမဆိုလုပ်မြာပဲ။ အဲဒၝဟာူမန်မာူပည်ိုံင်ငံရေးနဲႛူမန်မာူပည်ရဲႛ အနာဂတ်၊ ဒီမိုကရေစီရေးတိုႛကို သေဒဏ်စီရင်တာူဖစ်မြာပဲ။ ဒၝကို ပဵက်အောင်ဖဵက်ဖိုႛဟာ ဒီနေႛအရေးဋ္ဌကီးတာဝန်ပဲ။ တကယ်တော့ လူထုဆိံ္ဋခံယူပြဲအဆင့် ရောက်သြားတယ်ဆိုရင်ပဲ နအဖအဖိုႛ အူမတ်ရသြား္ဘပီ။ အဲဒီအဆင့်မြာ သူတိုႛဖြဲႛစည်းပုံကို ထောက်ခံမဲရအောင် နည်းမဵြိးပေၝင်းစုံနဲႛ ညစ်မယ်ဆိုတာ ဘာမသြံသယူဖစ်စရာမလိုဘူး။ အဲဒီလိုနည်းနဲႛ အတည်ူပလြိုႛရရင်ရ၊ မရရင်-။ မရရင်ရော ဘာ ထူးမြာလဲ။ သူတိုႛ လက်ရြိပုံစံအတိုင်း ဆက်အုပ်ခဵပ်ြသြားလိုႛ အေုကာင်ူးပစရာ ရသြားတာပဲူဖစ်မယ်။ ဒၝေုကာင့် ဆိံ္ဋခံယူပြဲဆိုတာ နအဖအဖိုႛတောိုံ့င်လည်ိးိုံင်၊ ရြံးလည်ိးိုံင်ပဲ။ ဒီနေႛအခၝမြာ ကိုယ့်ကိုထောက်ခံတဲ့ မီဒီယာတေရြိနေတယ်ဆိုတာ သမိုင်းရဲႛထူးခားခဵက်ပဲ။ အင်မတန်ကောင်းတဲ့ အခဵက်လည်ူးဖစ်တယ်။ ဒၝပေမယ့် မီဒီယာနဲႛေူမအောက်လုပ်ငန်းဟာူပဒၝးတစ်လမ်း သံတစ်လမ်ူးဖစ်တယ်ဆိုတာကို သတိပေၝ့လိုႛမူဖစ်ဘူး။ နောက်္ဘပီး ဒီမီဒီယာတေကြ အေးလင်ြတိုႛ၊ ဇာနည်တိုႛလို လူတေကြိုလည်း စင်ထိုးပေးနေတယ်ဆိုတယ်။ မီဒီယာနယ်ပယ်မြာ မထင်မတ်ြဘဲနဲႛ စစ်ပြဲတြေူဖစ်ပေၞနေတယ်။ အဲဒီစစ်ပြဲဟာူပည်သူလူထုရဲႛ အတြေးအခေၞကို အနည်းနဲႛအမဵား ဂယက်ရိုက်တယ်။ူပည်သူလူထုဟာ နအဖအေုကာင်း မသိတာမဟုတ်ဘူး၊ သိတယ်။ ဒၝပေမယ့် တိုက်ပြဲဝင်ဖိုႛ၊ လူထုလပ်ြရြားမဋ္ဌြကီးတြေ ဆင်ြိဲံဖိုႛ အတြေးအခေၞအရ အသင့်ူဖစ်္ဘပီလား။ ဒီ ၂ ဆင့်ဟာ မတူဘူး။ အတြေးအခေၞအဆင့် ရောက်အောင်ဆိုတာ လက်တြေႛအပၝ နည်းပေၝင်းစုံနဲႛ တဆင့်ူမငြ့်တင်ရသေးတယ်။ နောက်္ဘပီး လိုအပ်ရင်ရဲဆေးတင်တဲ့ တိုက်ပြဲတေလြည်ူးဖတ်သန်းစေရသေးတယ်။ တစ်ခုကတော့ သေခဵာတယ်။ူပည်သူလူထုဟာ ဘယ်တော့မြ သင်္စာမဖောက်ဘူး။ ။
Posted by maungyit on August 26, 2007 in Op-Ed
← မောင်စမြ်းရည် – သင်ရိုးတြဲဖက် လက်တြေႛပညာ	ိုံင်ငံရေးအကဵဉ်းသားဟောင်း ၈၈ ကေဵာင်းသားခေၝင်းဆောင် လေးလငြ် (ခ) ကိုလေိးံငြ့် စကားလက်ဆုံ – ၂ →	LeaveaReply Cancel reply	Enter your comment here...
Beruma Games	Top Posts	Yan Win Taung Ta Gar - Thapaynay Shawbo Pann	Than Win Hlaing – Moe Moe (Inya)	Win Pe and His Painting -aserial	117th Moe Gaung Pagoda Fastival & Burmese Traditional Food Eain Dra Kyaw Zin and Pyay T Oo's wedding in Jan	Maung Sein Win (Pa Dee Gone)- Burmese Literary Talk - Singapore - Sept 26th, 2010	Yan Win (Taung Da Gar) – Myanmar Palway	Cartoon Maung - Media Watch Dog must know how to Bark ...	Brokenhearted writer	Cartoon Saw Ngo - 2010, you will see the true color of Tatmadaw (again!!!)	Archives	September 2011 (104)
Top Clicks4.bp.blogspot.com/-Rtr4BA…moemaka.files.wordpress.c…moemaka.files.wordpress.c…Blog Stats	188,341 hits